Hoggaamiyihii mucaaradka Belarus Maria Kolesnikova oo la afduubtey | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Hoggaamiyihii mucaaradka Belarus Maria Kolesnikova oo la afduubtey
Haweeneyda hoggaamineysa banaanbaxyada ka socda dalka Belarush Maria Kolesnikova ayaa la afduubtey sida ay qoreen qaar kamid ah wakaaladaha wararka ee caalamku, afduubka waxaa geystey dad aan la caddeyn halka ay ka socdaan.
Xiliga la afduubanaayey Maria Kolesnikova ayey ku sugneyd bartamaha magaalada Minsk ee caasimadda dalkaas oo ay ka socdaan mudaaharaadyo looga soo horjeedo Lukashenko.
Kuwa afduubka geystey ayaa wejiyada soo qarsadey, waxaana ay ku qaateen gaari, sida ay warbaahinta u sheegeen dad arkaayey xiliga afduubku dhacaayey.
Warka afduubka haweneydan ayaa yimid kadib markii isla maanta oo Isniin ah ay soo baxeen in laxiray dad gaaraya 633 qof oo kamid ahaa dadkii ka qayb qaadanaayey mudaaharaadyada.
Booliska magaalada Misnk ayaa sheegay in aysan xirin Maria Kolesnikova sida ay ku warantey wakaaladda Interfax ee dalka Ruushanka, waxaana ay iska fogeeyeen afduubka.
Maria Kolesnikova ayaa ah haweeneyda keliya ee mucaaradka ka tirsaneyd ee ku hartey dalka Belarussia, waxaana ay isku daydey in ay tartanka doorashada la gasho hoggaamiyaha mudada dheer xilka hayey Lukashenko.
Tan iyo markii Alexander Lukashenko ku dhawaaqey in uu markii lixaad uu ku guuleystey doorashada codad ka badan 80% waxaa Belarus ka bilowdey mudaaharadyo ooda jabsadey.
Belarus waxay ka tirsanaan jirtey Midowgii Sofiyeetiga, Alexander Lukashenko keliya ayaana hoggaamkye ka noqdey tan iyo markii USSR ay burburtey sanadkii 1991.
–Booliska dalka Belarus ayaa boqolaal ruux xabsiga dhigay kadib dibadbaxyo rabshado wata oo tan iyo xalay ka socda magaaladda caasimada ah ee Miniski.
War laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in ciidamada amaanku xireen in ka badan 600 oo ruux kuwaasoo ka qeyb qaadanayay banaanbax ka dhan m/weynaha dalka Beleruus Alaksandar Lukashenko.
Abaabulayaasha banaanbaxa ayaa sheegay inay sii wadayaan banaanbaxa illa inta uu iska casilo m/weyne Lukashenko.
Inta badan hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka ayaa dalka iskaga baxay waxaana ay sheegeen inay naftooda u baqeen.
Hoggaamiyihii mucaaradka Belarus Maria Kolesnikova oo la afduubtey was last modified: September 7th, 2020 by Admin
Akhriso: Wararkii u Danbeeyay Dagaal Khasaaro Geystay Oo Ka Dhacay Magaalada Marka
Ergada dhexdhexaadita ee Midowga Afrika oo gaaray Addis Ababa
Madaxweyne Farmaajo & Axmed Madoobe oo kulan ku yeeshay Dhuusamareeb
Wasiirka gaashaandhigga Turkiga oo sheegay in ay daafici doonaan Azerbaijan